Vantaan kaupunki - Kuntavaalit 2021 somali
Kuntavaalit 2021 (somali)
Codkaada bixi, oo saameyn ku yeelo Vantaa!
Degmada waxaa go’aan lagaga gaaraa arrimaha guud ee dadka muhiimka u ah, sida waxbarahsda, goobaha isboortiga, maktabadaha, gaadiidka iyo dhismaha.
Codaynta doorashada oo aad ka qaybqaadato, waxay kuu suurtaggalinaysaa in aad saamayn ku yeelato howlaha ka socda magaalada aad deggan tahay iyo horumarkeeda. Xildhibaannada lagu soo doorto doorashada golaha degmooyinka, waxaa ay gaarayaan go’aanno saameyn ku leh nololmaalmeedka dadweynaha ku nool degmadaas. Vantaa waxaa ay dhab ahaan ku taagan tahay dareenka iyo muuqaalka dadwaynaheeda, marka dhammaan dadka kala da’da ah iyo kuwa asallada kala duwan ka soo jeeda, ay ka qayb yihiin doorashada dadka go’aanka ka gaaraya arrimaha magaalada.
Liiska xusuusinta ee ku saabsan arrimaha codaynta:
Waxaad barataa oo akhrisaa arrimaha ku saabsan murashaxiinta, adigoo galaaya adeegga internetka ee arrimaha doorashada (vaalikone). Waxaad doorataa qofka aad u aragto inuu socodsiinaayo arrimaha adiga kuu muhiimka ah.
Iska hubi inaad haysato aqoonsi shakhsiyadeed shaqeynaaya maalinka doorashada, sida baasaboor ama leysinka gaagriga.
Marka la joogo goobta codbixinta, waxaa la raacayaa hagista dhanka ammaanka ee looga hortagaayo faafista feyruska. Waxaad xusuusnaataa kala fogaanshaha, afshareerka iyo nadaafadda caafimaadka wanaagsan.
Waqtiyada dhaqan ahaan ay doorashadu ugu mashquulka badan tahay, waa maalinka rasmiga ah ee doorashada iyo maalmaha ugu horreeya iyo kuwa ugu dambeeya ee codbixinta hore. Hadii aad doonayso inaad ka fogaatid mashquulkaas iyo dadka badan, codkaaga ma dhiiban kartaa maalmo ka baxsan kuwaas aan soo sheegnay.
Vaalit.fi: Sii akhriso doorashada golaha deegaanka oo af soomaali ah (pdf)
Codee doorashada golaha deegaanka 2021! Iska ilaali saxmadda maalinta codeynta oo horey u sii codee: Finland gudaheeda 26.5. – 8.6. ama codkaaga bixi maalinta codeynta: Axada 13 juun.